IIMpanjaka 15: 1-38
IIMpanjaka 14 IIMpanjaka 15 IIMpanjaka 16
Ary ny tantaran'i Azaria sisa mbamin'izay rehetra nataony, tsy efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny tantaran'ny mpanjakan'ny Joda va izany ?
Ary Azaria dia lasa nodi-mandry any amin'ny razany, ka nalevina tao amin'ny razany tao an-Tanànan'i Davida izy; ary Jotama zanany no nanjaka nandimby azy.
Izany no ilay tenin'i Jehovah nolazainy tamin'i Jeho hoe : Ny taranakao hatramin'ny zafindohalika dia hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny Isiraely. Ka dia tanteraka izany.
Tamin'ny taona fahasivy amby telo-polo nanjakan'i Azaria. mpanjakan'ny Joda, no vao nanjakan'i Menahema, zanak'i Gady tamin'ny Isiraely, ary nanjaka folo taona tao Samaria izy.
Ary nampandoavin'i Menahema io vola io ny mpanan-karena rehetra tamin'ny Isiraely, dia sekely volafotsy dimam-polo avy isan'olona, homeny ny mpanjakan'i Asyria. Ka dia niverina ny mpanjakan'i Asyria, fa tsy nitoetra tao amin'ny tany.
Ary Menahema lasa nodi-mandry any amin'ny razany; ary Pekahia zanany no nanjaka nandimby azy.
Ary Peka, zanak'i Remalia, lefiny, dia nikomy taminy ka namely an'i Pekahia mbamin'i Argoba sy Aria teo Samaria, tao amin'ny trano-avo amin'ny lapa, ary teo amin'i Peka nisy olona dimam-polo lahy tamin'ny taranak'i Gileada; koa namono azy izy, dia nanjaka nandimby azy.
Ary Hosea, zanak'i Elaha, nikomy tamin'i Peka, zanak'i Remalia, dia namely azy ho faty ka nanjaka nandimby azy tamin'ny taona faharoa-polo nanjakan'i Jotama, zanak'i Ozia.
Ary ny tantaran'i Peka sisa mbamin'izay rehetra nataony, indro, fa efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny tantaran'ny mpanjakan'ny Isiraely izany.
Dimy amby roa-polo taona izy, fony vao nanjaka, ary enina ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Jerosa, zanakavavin'i Zadoka
Ary ny tantaran'i Jotama sisa mbamin'izay rehetra nataony, tsy efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny tantaran'ny mpanjakan'ny Joda va izany ?
Tamin'izany andro izany no vao nampandehanan'i Jehovah an'i Rezina. Mpanjakan'i Syria, sy Peka, zanak'i Remalia, hanafika an'i Joda.